Kooxdii Jwxo-shiil, oo Caynkii u Go,ay Cay iyo Aflagaadana Miciin Mooday! – Rasaasa News
Apr 17, 2010 aflagaado, Jwxo, maciin
Imisaan ka daa nidhi, dantu wada jir weeyee, imisaan ka daa,nidhi diracyada la dilayee la duudsiyi abaalkood darajo kuma helayside, dalka waynu wada naal, dagaalka waa la wada galay, adaase ugu dambeeye daahiina gooyee horta yaa diraca kaa dhigay “Jwxo-shiil”.
“Horaa loo yidhi habar karis xumi iyana gaal ku la,a” Jwxo-shiil, oo Eebe wayne amarkii halganka ay waday Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya si lama filaan ah ku soo dhex galay, ayaa xilka Jwxo loo dhiibay in uu hayso sida dastuurku dhigaayo 4 sano. Xiligaas ka dibna wax shir ah oo ka dambeeyey oo sharci ah ma dhicin, waxaana eegga laga joogaa 14 sano, Jwxo-shiil-la wali waxaa uu sheegtaa in uu yahay gudoomiyaha Jwxo.
Jwxo, maanta xaalkeedu meesha uu maraayo waa laga warhayaa; ciidan, dhaqaale, taageero iyo siyaasad meel cidlo ah ayey ka taagan tahay. Sabata keentay in ay sidaasi dhacdana waxaa masuuliyadeeda leh Jwxo-shiil, dhibaatada uu u gaystay halganka waxaa dheer dhiiga sokeeye lala daba socdo.
Waxaa maanta Jwxo-shiil, dhan ka noqotay dhamaan ummada Somalida Ogadeeniya, waxayna u naceen Jwxo-shiil, halgankii ay naf iyo maalba ku beeleen, waxayna doorteen in iyaga oo aan dagaal ku qaadin in la tuso in uusan waxba ahayn. Kol uu caafimaad u tagay South Afrika ayaa waxaa la sheegay in uu baryey beesha Absame isaga oo yidhi halgankii wuu baaba,ay ee taageera, jawaabta la siiyeyna waxay ahayd “adiga ayaa baabi,iyey.”
Maanta Somali galbeed ayaa waxay la timid fikir aan laga filayn, waxayna duufsatay dhamaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya, Itobiyana aqbal ayey ugu jawaabtay.
Jwxo-shiil iyo kooxdiisii ayaa is arkay iyaga oo cidla taagan, waxayna xiligan xaadirka ah bilaabeen in ay qaataan burush xaar leh. Burushaka xaarka leh waxaa la marinayaa kuli umada sheegata magaca beesha Absame meesha ay doonto ha degtee.
Somali galbeed kooxda Jwxo-shiil, way caayaysaa oo maxay u caayi sow iyagii xabada la dhacay, waxaa kale oo ay caayayaan Midowga Jaaliyada Jubaland oo iyadu ah mid aan shaqo ku lahayn dhulka Somalida Ogadeeniya balse ah Jaaliyad ka tirsan Jaaliyadaha Jamhuuriyada Somaliya. Waxaa kale oo ay kooxda Jwxo-shiil wax ka sheegaysaa Jaaliyaadka Itobiyanka ah ee dibadaha.
Awal hore kooxda Jwxo-shiil, oo koox dambiyeed ah way weerari jireen dadka ayna isku fikirka ahayn, maantase way xaan gabeen waxayna bilaabeen cay iyo afxumo ay iyagu leeyihiin.
Dalka waa la wada leeyahay in la xoreeyana waa kii wax walba loo beelay, rag iyo rabi buuna dalku leeyahay, laakiin waxaa xiligan xagal haraatiyey oo ay taariikh xumo ay haysataa kooxda Jwxo-shiil uu aabaha u yahay.
Somali galbeedna hadii ay Itobiya la garato wanaaga way dabo qabatay dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Jaaliyada cusub oo ay leedahay qurbo joogta degaanka somalida ayaa la sameeyey oo ka kooban 11 xubnood waana sidan.
* Dr Xuseen Cali Ibraahin – Gudoomiye
* Sakariye Maxamed Cumar Ugaas – Gudoomiye ku xigaanka kowaad
* Muse Maxmed Xaaji Xuseen(Sheeka-Xariir) – Gudoomiye ku xigeenka labaad
Xubnaha kale ee Golahan yaa kala ah:-
– Axmed Sheekh Maxamed Xuseen
– Maxamed Axmed nuur Dheeg Heebaan
– Bashiir Suldaan Maxamuud Haybe
– Cumar Maxamed- Nuur Xasan Xuseen
– Cabdirashid Cumar Jees
– Dayib Cabdillaahi Cali
– Jamaal Abdirisaaq Xaaji Maxamed
*Oohinta iyo Beenta kooxda Jwxo-shiil nala dhawra ee ay qortay Qorahey.comy waana sidan;
1-Xuseen dheere Gudoomiye
1. Zakariye M Omar Ugaas G-kuxigeen
2. Muuse sheeko xariir Xoghayn
3. Basher Maxamud Haybe Xubin
4. Axmed Sheekh- Xubin
5. Dayib Dheglow Xubin
6. Ahmed Cabdi Shakuur Xubin
7. Cabdirashid Cumar Jees Xubin
8. Axmed Iiman Xubin
9. Maxmed Gamadiid Xubin
10. Axmed Cabdi Cabdi Nur- Wareeray Xubin
11. Cabdirashiid Daahir Ahmed Aragsame- Xubin
12. Cabdi deeq Xubin
Saraakiil Sare oo ka tirsan Booliska Qoraxey oo Loo Qabtay Dilkii Liqoowe Muxumed Tayse
ONLF Concludes Three-day Consultative Meeting. January 23, 2022
Ethiopian Somali Regional State Raises $10.4 mlns in Aid January 19, 2022
Ethiopian Somali Regional State Raises $ 10.4 mlns in aid January 19, 2022
Safaaradda Turkiga ee Itoobiya ayaa u guurtay Kenya sababo la xiriira hanjabaad ka dhalatay iibka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn January 18, 2022
Drought Strikes Ogaden Pastoralists Without Assistance January 18, 2022
ONLF Concludes Three-day Consultative Meeting.
Jan 23, 2022 Rasaas
Ethiopian Somali Regional State Raises $10.4 mlns in Aid
Jan 19, 2022 Rasaas
Ethiopian Somali Regional State Raises $ 10.4 mlns in aid
Safaaradda Turkiga ee Itoobiya ayaa u guurtay Kenya sababo la xiriira hanjabaad ka dhalatay iibka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Jan 18, 2022 Rasaas